Agoosto | 2012 | hubaalnewspaper
Monthly Archives: Agoosto 2012
“Hantidharka Guud, Wax kasta oo uu Qaban lahaaba waa nin ka Baqaya Warqada Buluuga ah” Maxamuud Raage Ibraahim-Agaasimihii Is Casilay ee Wasaaradda Khaarijiga
“Madaxweyne Axmed, Taariikhdaba dib uma Eego, Buugiisana Kuma Jirto In Abaalka la Gudo.Wuxuu Dadka ugu Necebyahay kuwa waqtiga Adag kala soo dabaashay”-
London- (Hubaal)- Agaasimihii hore ee Wasaaradda Arrimaha dibbeda iyo Xidhiidhhka Caalamiga ah ee Somaliland Maxamuud Raage Ibraahin ayaa sheegay in Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo bilowday habdhaqan la mid ah kii taliskii Maxamed Siyaad, isla markaana ciddii ka hor timaada Baro-bogaandaheeda ay car juuq dheh ugu hanjabto, isla markaana ciidamada amaanka u adeegsato Siyaasiyiinta ka fallaagooba.
Maxamuud Raage, oo farriin qoraal ah kasoo diray magaalada magaalada London oo uu haatan ku sugan yahay, waxa uu ka hadlay baadhista hanti dhawrka guud ka wado wasaaradda warfaafinta oo uu sheegay inaanu u madax banaanayn hawlihiisa, kana baqo qabo in runtu galaafato xilkiisa haddii uu runta sheego.
Sidoo kale waxa uu qoraalkiisa ku xusay Xoghayihii Maalliyadda ee Xisbiga KULMIYE waqtigii uu mucaaridka ahaa Maxamed Cabdi Iskeerse oo uu sheegay in uu geed dheer iyo mid gaabanba u koray sidii Md. Siilaanyo Kurisga u fuuli lahaa, balse Abaal looga dhigay in Duqu ka tirtiro buugiisa xusuus qorka.
Amuurahaas iyo kuwo kale oo badan ayaa Maxamuud Raage Ibraahin kaga hadlay Qoraal dheer oo uu u qaybiyay warbaahinta xalay, waxana qoraalkiisu u dhignaa sidan: “Salaanta islaamka ka dib, Ma jecli in aan arrimihii aan hore uga hadlay dib ugu noqdo, waayo xiiso badan ma laha, waxaa dhammaantiin aad ka markhaati kacaysaan Wasiirro iyo shaqaalle isku riix-riixaya musuq baahay, Waxaan ka dheehanayey maalmahan danbe Hantidharka Guud oo dhex miranaya Wasaarado , runtii ninkaasi wax kasta oo uu qaban lahaaba, waa nin ka baqdin qaba warqada Buluuga ah ee sida daadka uga soo burqata Madaxtooyada Qaranka Somaliland, Taasoo runtii ku noqotay Murug aad u weyn Madaxda Reer Somaliland, Waxaan maalin la kulmay Wasiiradii Xilka laga qaaday mid ka mid ah , Waxaan ku idhi Wasiir Hebelow iska Samir waan ogahay oo waxba maad dhimine, Inta uu qoslay ayuu waxa uu igu yidhi (Agaasime Maxamuud Warqadan waxa aan haystay 8 bilood ka hor , waayo maalin walba dhalinyaro ayaa ii sheegi jirtay in wiigan soo Socda Lay eryayo. Runtii arinkaa aad baan uga damqaday waxaan ku sameeyey Baadhid , Runtii arinkaasi waxa uu ahaa xaqiiq.).
Dawladda maanta jirtaa kama duwana tii Sideedtameeyadii (1980) ka jirtay Villa Soomaaliya. Haddaad i is tidhaahdo inyar wax toosi , waxa uun jawaabta ugu badan noqon waa lagu xidhayaa, bal rag xigmad kama dhamaatee Ciiddanka Qaranka/Booliska Somaliland, Ma waxaa loo sameeyey ninkii Dalka Denbi ka gala, mise Siyaasiyiinta in loogu Cago-jugleeyo ayaa loo sameeyay?. Taas waxan kaga jawaabi karaa uun gabaygii Caanka ahaa ee Gudgude ee Hadraawi tiriyey 1990-kii:
“Marna waa calool garac siddiyo, xaal ku soo gala’e
Kol haddaanay maankaaga gadin, talana kaa geynin
Gurracnaanta qiil lagu saxoo, loo gudbaa jira’e
Gudboonaantu way daalisaa, ruuxa meel gurane
Nin hadduu go’aankiyo sharciga, gawrac ugu jiido
Hadba goondhabaaliyo hadduu, Gooddi-furan keeno
Gacalnimo hal loo yidhi hadduu, gubasho sii beero
Guudaan haddii uu ku liqo, ereyga geedeysan
Runta wuxu u guul-guulayaa, way gun-dheer tahaye
Goldaloolo qudha maaha iyo, goonnidaa taliye
Gedaan loo filayn baa jirtiyo, Geel-la-daaq kale’e
Hadba geed-is-maris baa u hadha, guul dad leeyahaye
Miyaan Geeddi-Baabbow arladu, gelina waayeynin.
Gole miiggan, geed sheegan iyo, garangar muunaysan,
Gudban iyo cod laba geesa iyo, guurti kala soorta,
Garnaqsiga mudducigoo tashiga, gooni uga showrey.”
Haddaba, Haddaan dib u jeedaaliyo waayihii KULMIYE, Waxaa Qalbigiina dib u xasuusaneysaan Maxamed Iskeerso, ninkii guryihiisa Xaraashay, ninkii kabuhu kaga idlaadeen safar iyo in uu magaalada Hargeysa caruurta shiriyo, Waxa aan xasuustaa Habeen Xaflad Dhalinyaro qabsatay oo uu Kaadh Martiqaad (Invitation) ii dhiibay, waxa uu taagnaa Hotel Imperial hortiisa. Waxa inoogu danbeysay markii KULMIYE Guulaystay, diba laysma weydiin, Bukaan jiif ayuu ahaa markii warkiisa iigu danbeysay, Rabbow Caafimaad sii waa Ramadaan’e, Gudoomiye Maxamed Kaahin baa la cararay oo dalka ka dhoofiyey, Madaxweyne Axmed Maxamed, ma Yaqaannaa Ninkaas?, Maya, Maya, Maya, Taariikhdaba dib ba uma eego, Buugaagtiisa kuma jirto kelmada Abaalka in la gudo. Waxaanba is idhaahdaa waxa uu dadka ugu neceb yahay kuwa waqtiga adag kala soo dabaasha, Yaabay!!!!!!!!.
Hadda ma foga Maalintii Hotel Mansoor Xaflada aynu ugu qabanay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, kelmaddii uu yidhi waxa ay ahayd: Axmedoow (Madaxweyne Siilaanyo), horaa lagaaga hiiliyey’e Maanta ku seexo dib lagaaga hiilin maayo, Maalintaa Gaboose waxa uu ahaa nin Reer Kulmiye Amaanaan oo ay jecel yihiin, waxa uu ahaa Guddoomiyihii Gobollada Bari, in badan baan wada Safarnay, Shaqo Xisbi iyo Mid Qaran waan la wadaagay , Waa nin karameed Ballanta oofiya haddii lala Ballamo. Waar Raggoow Taariikhda dadkaa ka markhaati kacaya ee Rabbi halaga Dhawrsado, Qabyaalad sharaf ma leh.
Adiguba ka taliyoo haddii aniga oo kusoo dhaweynaya, ku karaamaynaya , kuu aqaan Hogaan iyo Abti, oo aan dhabarka beelo oo gaadhi ila rogmado, markii rabbi iga kiciyey ee aad guulaysatay, Maxaad iga yeeli lahayd, ma waxaad igu odhan lahayd waxa uu doonayo ayuu iga waayey, Tan xagee garteeda lagu qaadayaa? Allow na sama bixi waa na sidataaye.
Illayn loo dhamaan maayee raga qaarkii haba dhaxalaan tacabka rag u soo dhintay, nasiibkuba waa wax jira’e, laakiin ayaan daro waxaad moodaa in ay license ay u qaateen si ay xoolaha qaranka iyo umada reer Somaliland ugu dhici lahaayeen qalin, Runtii Wasiiradeenu ha ogaadan in RABBI arsaaqada, iyo sharaftaba bixiyo iyo in Cadaalad Darro, Musuq, iyo umadda loo dulmiyaa aanay marnaba sharaf noqonayn, Xoolaha maanta loo qaatay qalinka ee la dhacayo, sidaan hore u sheegay waxaa iska leh oo ay tahay cashuurtii islaamaha Hilibka , Sigaarka iyo qaadka Shaarica ku iibiya, Waxa ay u bixiyeen in Dalka lagu difaaco, Dadkooda loogu sameeyo Adeeg Guud, sida iskuulo, Goobo Caafimaad, Wadooyin iyo wixii la halmaala.
Waxaan kusoo afmeeraya Gurta inta aad joogtaan , Somaliland waa il biyo leh oo gudhi mayso , Ragna dabadiin waa u soo kacayaa, Waxay yididiilo I gashaa marka aan arko Kumaankun hablo iyo wiilal ah oo Jaamcadaha Dalka u kala foofaya, Kuwaas Allow ka badbaadi Cudurkan galay rag ka mid ah madaxdeena ee ku dhacaya marka ay kursiga Fadhiistaan, ka horna ay ka badqabaan.
Waxaan idinku dardaarayaa inaydaab Ninna Xaq-darro ku taageerin, Dalkana inoo dhawra oo yaan marnaba Sharciga Gacanta lagu qaadan, nimankani mudday leeyihiin oo xaga Rabbi baa laga qoray, laakiin Runta aynu sheegno ninkay dhibtow yeelkadaa.
Waxaan ka cudur daaranayaa in ay dawlada ku jiraan rag/dumar badan oo qiimo badan oo aanu wanaag ku tuhmayno, laakiin ma awoodaan in ay wax ka qabtaan arrimaha ay ummadda reer Somaliland ka muujiyeen dareenkooda oo ah Musuqmaasuq baahay, Cadaalad Darro, Dulmi, Caga-juglayn, cabudhin iyo hoggaan xumo sadhaysay Maamulka maanta jira.” Sidaa ayuu Qoraalkiisa ku soo gebogabeeyay agaasimihii hore ee Wasaaradda Arrimaha dibeda iyo xidhiidhka caalamiga ah Maxamuud Raage Ibraahim.
“Waxaan ahay mashquul ee kollayga ha iga ridin, waxa bilaabmay Maalmihii dadka waaweyn aanu u adeegaynay”
Hargeysa-(Hubaal)- Saxmad iyo cidhiidhi ayaa ka jira suuqyada magaalada Hargeysa tobankii maalmood ee u dambeeyay bishan barakaysan ee Ramadaan. Waxa si weyn carruurta loogu iibinayaa dharka Ciida, waana badeecada kaliya ee maalmahan suuqeedu xaamiga yahay.
Kumanaan waalidiin ah oo rag iyo dumarba iskugu jira oo wata carruurtoodii ayaa mashquuliyay jidadka cidhiidhiga ah ee faras-magaalaha Hargeysa, kuwaasi oo doonaya inay dharka munaasibadda Ciidul fidriga u iibiyaan si ay uga farxiyaan dhalaankooda. Suuqa Waaheen waxa meheradaha Bacadluhu ay keeneen dhar aad u qurux badan oo laga soo waariday dunida carabta gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta. Waxa suuqani shaqeeyaa maalmihii u dambeeyay illaa niska dambe ee habeenimo. “Waxaan dareemayaa cidhiidhi, waxaan aaminsanaa in habeenkii uu suuqu firaaqo noqon doono, sidaasi ayaan u imid suuqa caawa si aan u ciidsiiyo oo dhar iyo kabo ugu iibiyo afar carruur ah oo aan dhalay,”ayay tidhi Hooyo Xaali Cismaan Cabdi oo ah 53 jir daadihinaysay afar carruur ah oo sadex ka mid ahi hablo ahaayeen oo aanu kula kulanay suuqa dhexdiisa iyada oo ku mashquulsan dharka ciidda ee carruurteeda ay u iibinayso. Hooyo Xaali oo noo sheegtay inay ka mid tahay bulshada dabada dhexe dhaqaale ahaan waxay intaa ku dartay inay la yaabtay dharka carruurta oo sanadkan qaali ku ah suuqyada Hargeysa, waxaanay sheegtay inay afartaasi carruurta ah oo laba ka mid ahna ay kabo ugu dartay ku joogaan lacag dhan 120 dollar. “Waxa sanadkan Bacadluhu ay wax ku iibinayaan qaali waxaana qaaliyoobay dharka carruurta waana mid ay laasimeen Bacadleyaashu xilligan oo kale sanad walba,”ayay raacisay Hooyo Xaalli.
Labadii habeen ee u dambeeyay waxa suuqa Waaheen soo galay oo dhar iyo kabo ka iibsanayay dadka waaweyn rag iyo dumarba. “Waxaan ahay mashquul ee wakhtiga ha iga qaadin kollaygana ha iga ridin. Suuqu wuu wanaagsan yahay waxaanu ku gudo jirnaa maalmihii u dambeeyay ee Bisha ramadaan. Carruurta waxaan odhan karaa 75% bilowgii iyo badhtamihii bisha ayaa loo iibiyay dharkii Ciida, maalmahan waxa bilaabmay dadka waaweyn oo aanu runtii u adeegayno. Waad arkaysaa dharka iyo kabaha quruxda badan ee meherad walba yaala,”ayuu si deg-degsiimo ku jirto ugu tiraabay Baashe Ibraahim Ciise oo ah mulkiilaha meher bacadle ah oo ku taalla badhtamaha Suuqa.
Suuqyadda magaalada Hargeysa ayaa tobankii maalmood ee u dambeeyay ee bishan Ramadaan laga dareemayay samxad weyn, waxaanay suuqyadu furan yihiin illaa niska dambe ee habeenkii, iyadoo ay suuqa bacadluhuna uu yahay mid xaami ah oo dadweynuhu si la yaableh uga adeeganayaan.
Waddooyinka ku gadaaman suuqa Waaheen ayay ciidanka Nabad-gelyada wadooyinku la tacaalayaan inaanay Gaadiidku marin si ay uga hor-tagaan si shilal khasaare dhaliyaa uga dhicin.waxa kale oo agagaarka suuqa Hareysa si uga ganacsanaya Ganacsatadii bagaashleyda ahayd ee badhtamihii sanadkan dawlada Hoose ee Hargeysa ka rartay jidka wadnaha ee badhtamaha Hargeysa, waxaanay badeecadahoodii ku dul iibinayaan Kaaryooneyaal ay la guur-guurayaan. Waxay iibinayaan dhar, qalabka carruurta lagu ciyaar siiyo iyo kabo.
Sidoo kale, suuqa labaad ee caasimada oo ah suuqa Gobonimo ee ku yaala Idaacada Radio Hargeysa ayaa isna camiran oo si weyn looga dukaansanayaa.
Geesta kale, Meheradaha Cosmatic-yada ayaa iyaguna aad looga iibsanayaa kiriimadda iyo dawooyinka haweenku isku qurxiyo, dharka iyo kabaha. Waxaanay meheradahani badeecadahooda ku gadayaan qiime ka sareeyan kan suuqyada bacadlaha.
Waxa kale oo iyana aad u mashquul ah xawaaladaha lacagaha laga xawilo oo shaqeeya illaa xiliyada dambe ee habeenkii si ay dadweynuhu uga soo qaataan lacagaha ay eheladooda qurbo jooga ahi u soo diraan.
Shirku saabsan Aayo ka Tashiga Umadaha iyo kala Go’a dawladaha: Is barbardhig lagu sameeyay Koonfurta Sudan iyo Somaliland.
Shir ku saabsan Kala Go’a Dawladdaha oo Somaliland Badheedhaheeda ka Dhiibatay
Jubba-(Hubaal-w/wararka)- Shirku saabsan Aayo ka tashiga Umadaha ( Self-determination ) iyo kala Go’a dawladdaha, isla markaana Is barbardhig lagu sameeyay Koonfurta Sudan iyo Somaliland ayaa lagu qabtay Jaamacada Jubba ee Koonfurta wadanka Sudan.
Shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen Jubba University iyo Machadka Cilmi baadhista ee ku yaala dalka Sweden ee loo yaqaan The Nordic Africa Institute. Waxa ka soo qayb galay khubaro ka kala yimi meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid yihiin Koofurta Sudan, Koonfur Africa, Maraykanka, Nigeeriya, Itoobiya, Sweden, Kongo, D Jibouti iyo Somaliland. Waxaana laga soo jeediyay Cilmi baadhis la soo diyaariyay oo ka hadlay xaqa aaya ka tashiga iyo kala go’a dawladaha, iyada oo si weyn la isu bar bardhigay Somaliland iyo Wadanka Cusub ee Koonfurta Sudan.
Somaliland waxa uga qayb galay Boobe Yuusuf Ducaale, Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo ka soo jeediyay Cilmi baadhis uu ka qoray Midnamadii Burburtay ee Somaliland iyo Somalia iyo doonidii mushkilada lahayd ee Shantii Soomaaliyeed. “The Failed Union of Somaliland and Somalia and the Tragic Quest for ‘Greater Somalia” iyo Adam Xaaji Cali Axmed, oo ah Macalin sharciyada iyo Cilmiga Nabada ka dhiga Jaamacada Hargaysa, ahna Hormoodka Machadka Barashad Nabada iyo xalinta khilaafaadka ee Jaamacada Hargaysa, waxanu halkaas ka jeediyay Cilmi baadhis uu qoray oo ku saabsan “Caqabadaha ka hor yimi in Somaliland ku guulaysato Ictiraaf ay ka hesho beesha caalamka iyo Sida ay Somaliland uga gudbi karto “Somaliland: The Challanges of Winning International Recognition and its Prospects”